LittleJungle apt#3 studio 1 mil to Palm/Eaglebeach - I-Airbnb
Noord, Aruba, i-Aruba
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Wouter & Vivian
Ngo-82 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Wouter & Vivian Ungumbungazi ovelele
Ikhishi lifakwe kahle
Igumbi lokugezela elingu-1
igumbi lokuhlala/ lokudlela
Iphuli (kwabiwe namanye amayunithi)
I-Sun Garden (yabiwe namanye amayunithi)
Ifulethi lethu elisanda kulungiswa lise-San Miguel, indawo ethule kakhulu futhi ephumulele e-Noord. Le ndawo inengadi yasezindaweni ezishisayo eyakhiwe kahle enamachibi okubhukuda. Impahla igaywe ngokuphelele endaweni ethule enendawo yokupaka yangasese.
I-Little Jungle iyindawo epholile ephumulele encane lapho izivakashi zingaphumula khona ngemva kosuku olwandle.
Izinsiza: Imibhede yekhwalithi enhle - indlu yokugezela - ilineni lombhede - amathawula - ukuhlanzwa kwamasonto onke - amanzi ashisayo (lokhu akujwayelekile e-Aruba) - i-inthanethi yamahhala engenantambo - i-cable TV - ikhishi elihlome kahle - elinezisika, izibuko, amabhodwe namapani, i-microwave, ifriji / isiqandisi, igedlela kanye ne-toaster. Nge-air conditioning esitudiyo.
Siphinde sinikele ngezihlalo zasolwandle, amathawula apholile nasogwini.
Izicelo ezingaphansi kobusuku obungu-2 zingamukelwa ngokubona kwabanikazi.
Ukuphuma kuyavumelana nezimo uma kungekho ukufika okuzayo. Sicela usazise isikhathi sakho sokufika nesikhathi sokuhamba uma ubhukha.
Kunendawo yokuwasha yemali encane.
Sihlale sitholakala ukuze sisize nganoma imiphi imibuzo nge-Whatssap kanye Nezingcingo.
I-Little Jungle itholakala kalula nje ku-1,6 km (1 mile) kude namabhishi, isundu ne-eagle beach. Isitolo esikhulu seSuperfood sihamba nje imizuzu eyi-10 ukusuka efulethini. Ezinye izinsiza eziseduze nale ndawo yokuvakasha zihlanganisa amabhishi aziwa kakhulu e-Aruba, i-Palm Beach ne-Eagle Beach kanye nezindawo zokushushuluza e-Arashi nase-Malmok Beaches. Kungakhathaliseki ukuthi uhambahamba emabhishi futhi ubukele ukushona kwelanga, uzizwele indawo yedolobha ephithizelayo yase-Aruba noma uphumule ukuzola kwaleli fulethi elihle leholide elincane,
I-Little Jungle iyindawo ekahle yokuvakasha yakho.
I-wifi esheshayo – 82 Mbps
Sitholakala cishe eduze kwesitolo se-Superfood futhi siseduze kakhulu nomgwaqo omkhulu we-Sasaki A1. Inxanxathela itholakala endaweni yokuyeka futhi kude ngokwanele nemigwaqo emikhulu ukuze kugwenywe umsindo wethrafikhi.
Ibungazwe ngu-Wouter & Vivian
Singakuhlelela imoto eqashwayo kuhlanganisa. isevisi ye-shuttle esuka esikhumulweni sezindiza ukuya ehhovisi labo. Sizoba lapho uma ufika e-Little Jungle ukuze ungene ukuze uchaze konke odinga ukukwazi nge-Little Jungle. Uma kuyisikhathi sakho sokuqala ku-Aruba sithanda ukuncoma izindawo zokudlela, sikhombise izitolo ezinkulu kanye nezinto okumelwe zenziwe nokungamelwe. Sizohlala sitholakala nge-WhatsApp noma izingcingo ukuze sisize nganoma imiphi imibuzo noma izicelo izivakashi zethu ezingaba nazo.
Singakuhlelela imoto eqashwayo kuhlanganisa. isevisi ye-shuttle esuka esikhumulweni sezindiza ukuya ehhovisi labo. Sizoba lapho uma ufika e-Little Jungle ukuze ungene ukuze uchaze…
UWouter & Vivian Ungumbungazi ovelele